गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच कुटाकुट, अध्यक्षको दुईवटा दाँत भाँच्चियो! - ramechhapkhabar.com
गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच कुटाकुट, अध्यक्षको दुईवटा दाँत भाँच्चियो!
सप्तरीको छिन्नामस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच कुटाकुट भएको छ। अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डल ‘कुरुड’ र उपाध्यक्ष उषाकुमारी मण्डलबीच कुटाकुट भएको हो। मंगलबार भएको कुटाकुटमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यनारायणको दाँत भाँच्चिएको बताइएको छ।
गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा किसानलाई गहुँको बिउ वितरण गर्ने विषयमा विवाद भएको थियो। विवाद बढ्दै गएपछि उपाध्यक्ष उषाकुमारीले अध्यक्ष सूर्यनारायणमाथि कुर्सी प्रहार गर्न खोजेको वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष दिपेन्द्र प्रसाद यादवले जानकारी दिए।
किसानलाई गहुँको बिउ वितरण गर्ने विषयमा विवाद भएको थियो। अध्यक्ष र उपाध्यक्षज्यूबीच भनाभन भइरहेको थियो। उपाध्यक्षज्यूले एक्कासी कुर्सी समातेर अध्यक्षज्यूमाथि प्रहार गर्न खोज्नुभो,’ वडाध्यक्ष यादवले भने, ‘उपाध्यक्षज्यूले कुर्सी प्रहार गर्न खोजेपछि अध्यक्षज्यूले प्रतिकार गर्दा झडप भयो। त्यसक्रममा अध्यक्षज्यूको दुईवटा दाँत भाँच्चिएको छ।’
झडपका क्रममा उपाध्यक्ष उषाकुमारीको हात चोट लागेको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका एक अधिकारीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच झगडा भएको भन्ने सूचना आएपनि अहिले सबै शान्त भइसकेको बताए।
‘अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच झगडा भएको भन्ने कुरा आएको थियो। अहिले दुवै जना आ–आफ्नो घर गइसक्नुभएको भन्ने कुरा आएको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा सप्तरी प्रहरीका एक अधिकृतले भने।